UMengameli Zuma nomyalezo entsheni yakuleli | News24
UMengameli Zuma nomyalezo entsheni yakuleli
Johannesburg - UMengameli Jacob Zuma wethule inkulumo ngoSuku lweNtsha eTshing, eNorth West, ngoLwesihlanu wathi kubalulekile ukuba yingxenye uma kuthuthukiswa izwe.
Uthe ekhuluma kwakhona ukuxokozela obekwenzeka emuva, abafundi bememeza bethi “Zuma Must Fall”, baze bakhishelwa ngaphandle.
“INingizimu Afrika imaka iminyaka engu-41 ibungaza izidubedube ezabheduka ngomhlaka-16 Juni, 1976,” esho.
Ubeqondise emashini yabafundi ababemelene nokufundiswa ngesiBhunu ezikoleni.
Uthe lolu suku lubalulekile ezweni lethu ngoba lutshengisa isibindi sentsha yango-1976 eyabhekana ngqo nohulumeni wobandlululo.
“Bagcwala izitaladi ngoba befuna ukuqhubeza amaphupho entando yeningi kuleli bese beqeda nya nangengcindezi eyayikhona ngaleso sikhathi.
“Siyawahlonipha kakhulu la maqhawe aseSoweto kanye nekwezinye izingxenye zezwe adlala indima kule mibhikisho ka-1976,” esho.
OLUNYE UDABA: Akayi ndawo uMengameli Zuma, kusho i-ANC
Uphinde wathi izwe liyabahlonipha abaholi babafundi bangalowo nyaka abaqinisekisa ukuthi baqhuba umzabalazo wezombusazwe, owagcina ufezekiswa ngo-1994.
“Asibashiyi ngaphandle nabesifazane abadlala indima enkulu kule mibhikisho. Yize bengagqamile emlandweni, kepha sithanda ukusho ukuthi siyawazi amagalelo abo. Kunomkhuba wokunaka kakhulu abesifazane uma kuqoshwa umlando,” kuqhuba umengameli.
Uqhube ngokuthi intsha yakuleli ilwela ukungaqasheki, ezenhlalakahle kanye nezemfundo.
“Uhulumeni wengcindezelo waphendula intsha eyayibhikisha ngezibhamu, thina njengohulumeni wentando yeningi sinxusa ukuba intsha isebenzisane kanye nathi ukuze kufezekiswe izimfundo zayo.
“Sifuna intsha ifunde, ihlukane nezidakamizwa nophuzo oludakayo iphinde futhi iziqhelelanise nokusuleleka ngengculazi ngokuthi izivikele, labo asebethelelekile badle imishanguzo. Kuhle futhi nokuthi intsha ithole inkululeko yezomnotho,” esho.